Masinina fampandrenesana mialoha mialoha ny fantsom-boaloboka-HLQ
Induction preheating fantsona vy misy savaivony 14mm, 16mm, ary 42mm (0.55 ", 0.63", ary 1.65 "). Ny halavan'ny fantsona 50mm (2 ″) dia hafanaina hatramin'ny 900 ° C (1650 ° F) ao anatin'ny 30 segondra.
DW-UHF-6KW-III mpanasitrana famoronana tanana
• Fantsom-by misy OD: 14mm, 16mm ary 42mm (0.55 ", 0.63", ary 1.65 ")
• Ny hatevin'ny rindrina: 1mm, 2mm, ary 2mm (0.04 ″, 0.08 ″, 0.08 ″)
Hery: 5 kW ho an'ny fantsona 42mm, 3 kW ho an'ny fantsona 14 sy 16 mm
Ny hafanana: 1740 ° F (950 ° C)
Fotoana: 26 seg.
Ampidiro ao anaty coil ny fantsom-by.
Asio hafanana fampidirana mandritra ny 26 segondra.
Esory ny fantsona amin'ny coil.
Ny mari-pana mialoha ny hafanana dia tratra latsaky ny 30 segondra ho an'ireo fantsom-by vy telo samy hafa. Ny rafitra fampidirana 5 kW dia azo ampiasaina amin'ny fanafoanana tsara ny fantsom-by misy savaivony sy hateviny.
Sokajy Technologies Tags mividy preheater fampidirana, preheater fampidirana, vidin'ny preheater fampidirana, induction preheating, induction preheating machine, induction preheating system, fantsom-panafody preheating, preheating vy, preheating fantsona, fantsona vy Post Fikarohana